Sidee loo soo xulayaa Baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed? - Awdinle Online
Sidee loo soo xulayaa Baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed?
Guddoomiyaha Guddiga farsamada soo xulista Xubnaha Barlaamaanka Labaad ee Koofur Galbeed Maxamed Keeroow Maxamed, ayaa faah-faahin ka bixiyay waxyaabaha horyaalla iyo qaabka ay u wajahayaan shaqada loo igmaday.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in 95 Xildhibaan laga dhigayo mudanayaasha Baarlamanka Koofur Galbeed halka ay markii hore ka ahaayeen 149 iyaga oo raacaya Dastuurka u yaalla.
Previous articlePresident Farmajo of Somalia met with Muse Bihi Somaliland Face to Face
Next articleShirkadaha Forex-ka oo ku soo badanaya Muqdisho & Shaki xoog leh oo ka taagan